Izindaba - Umkhiqizo omusha wephepha le-FRP roofing sheet
Ishidi Lensimbi Elikhonjiwe
I-FRP PLASTIC Ishidi Lophahla
Umkhiqizo omusha we-FRP sheet sheet
I-Shandong Baimiao yakha umugqa omusha wokukhiqiza wophahla lwophahla lwensimbi lwe-FRP ngoJuni ka-2020 unyaka, ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kungamamitha ayi-2,000,000, ikakhulukazi kukhiqiza ukwakheka kwamagagasi nesimo se-trapezoid, okusobala, okuguqukayo, okumibalabala.
Izinzuzo ze-FRP fiberglass roofing sheet:
(1) Ukudluliswa kokukhanya: Ukudluliselwa kokukhanya kwebhodi yokukhanyisa yeBaimiao FRP kungama-60-85%, Ngemuva kweminyaka eyishumi, ukukhanya kwe-FRP kungu-6% kuphela, kuyilapho kwe-PVC kungu-15% kuye ku-20% no-12% kuye ku-20% i-fiberglass.
(2) ukumelana nomthelela: izikhathi ezingama-250 kuya kwezingama-300 zengilazi ejwayelekile, izikhathi ezingama-30 zepuleti le-acrylic, izikhathi ezi-2 kuye kwezingama-20 zengilazi ethintiwe, eyaziwa ngokuthi "ingilazi engaphukile" kanye "nensimbi yomsindo".
(3) Ukuvikelwa kwe-UV: uhlangothi olulodwa luboshwe uhlangothi olulodwa ukuluvikela emisebeni ye-ultraviolet kanye nokwelashwa kwe-anti-condensation ohlangothini olulodwa.
(4) Isisindo esincane: amandla adonsela phansi athile kuphela yingxenye yengilazi.
(5) Ukonga amandla: uma isetshenziselwa izakhiwo ezinemishini yokushisa, iqinisekisa ukuthi igumbi lifudumele ebusika futhi lipholile ehlobo, futhi umphumela wokushisa ukushisa ungama-7% -25%.
(6) Ukuguquguquka kwesimo sezulu: ngeke ithambe ku-135 ℃, futhi alukho ushintsho olukhulu.
(7) Ukumelana nesimo sezulu: Kuzinzile kusuka ku -40 kuya ku-120 ℃ ngamahora we-4,000, i-yellowing degree ingu-2, futhi ukudluliswa kokukhanya kwehle ngo-0.6% kuphela.
(8) I-Anti-condensation: Ngaphandle kwe-0 ℃, i-23 oor yasendlini, umswakama ongaphansi kwama-80%, akukho ukufinyela ebusweni bangaphakathi.
Isikhathi Iposi: Oct-12-2020
I-Shandong Essar Import and Export Trading Co., Ltd.